Tranga telefaona, Cable Charging, Herinaratra finday - NUEVASA
Mozika Vaovao Ankafizo ny fiainana Headset Headset-S9 XR
Mozika Vaovao Ankafizo ny fiainana Headset-C500 Plus
IPhone 11 Pro dia manana IMD tokana ambany miaraka amina akorandriaka telo
Safidio tsara ny fitaovan'ny vokatra.
Lavorary ny antsipiriany rehetra amin'ny vokatra.
Tokony ho vidiny afa-po ianao.
Tamin'ny 2005, Yiwu Yitian teknolojia co., Ltd. dia niorina tao Yiwu, faritanin'i Zhejiang, izay ivon-toeram-pizarana manerantany ho an'ny entana kely. Miaraka amin'ny fampandrosoana ny orinasa, Yiwu Leixin trading co., Ltd. natsangana tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny taona 2017. Ny orinasa hatramin'ny niorenany, manaraka hatrany ny tsipika marika, miezaka ny manangana ny rafitra mifanaraka amin'ny fahavelomany sy ny fivoarany, manamafy ny fifehezana anatiny, manatsara ny fenitry ny serivisy…
Tamin'ny 2005, Yiwu Yitian teknolojia co., Ltd. dia niorina tao Yiwu.
Ny fisokafana, ny fandraisana an-tanana, ny fahatokisan-tena ary ny fitsirihana ny maso no fihetsika ataontsika.
Manantena ny fiaraha-miasa ataonareo izahay.